तपाईको अर्को भेटमा डाक्टरलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार मनोरञ्जन औषधि जानकारी भारी खेल समुदाय, कल्याण समुदाय, कम्पनी समाचार औषधि बनाम मित्र खेलहरु समुदाय कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कल्याण >> तपाईको डाक्टरलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न
तपाईको डाक्टरलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न
तपाइँको उत्तम आत्ममा हुन, तपाइँ तपाइँको स्वास्थ्य कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक छ। त्यो प्रक्रियाको एक हिस्सा तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग विचारशील र जानकारीपूर्ण कुराकानी भइरहेको छ। व्यक्तिगत जानकारीका साथ सशस्त्र मेडिकल अपोइन्टमेन्टमा आउन र तिनीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा छलफल गर्ने योजनामा ​​बिरामीहरू आउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जैक्सनभिल, एफएलका चिकित्सक र चिकित्सा शिक्षाकर्मी क्रिस कारुब्बा बताउँदछन्।
अमेरिका को कति प्रतिशत मोटो छ
उनले सिफारिस गरे कि बिरामीहरूले स्वास्थ्य जर्नल राख्नु पर्छ। यसमा तपाइँको घरको रक्तचाप वा रगतमा चिनी पढाई ट्र्याक गर्न, अवधि, समय, र तपाइँका लक्षणहरूको गुणस्तर, र तपाइँको डाक्टरलाई सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू समावेश गर्न सक्छ। यदि तपाईं केहि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, यसलाई ल्याउन वा सोध्न नडराउनुहोस्।
स्वास्थ्य समस्याहरू अनुभव गरिरहेका बिरामीहरूको लागि स्वास्थ्य प्रश्नहरू सोध्नु विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। [बिरामीहरूले] उनीहरूको आफ्नै शब्दावलीमा, समस्या वा सम्भावित समस्या के हो, र समस्यालाई समाधान गर्ने वा रोक्ने योजना के हो भनेर बुझ्नुपर्दछ, नर्सका व्यवसायी क्यारोल थेलेन भन्छन्। दयालु निजी चिकित्सकहरू लुथरभिल, मेरील्याण्डमा। त्यसो भए, यदि उनीहरूले समस्यालाई रोक्ने वा समाधान गर्ने लक्ष्यमा कुनै अवरोधहरूको पूर्वानुमान गरे भने, उनीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसम्म ल्याउन सक्छन्।
तपाइँलाई तयार पार्न मद्दतको लागि, हामीले जानकारीको एक सूची बनायौं जुन तपाईंले आफूसँग अपोइन्टमेन्टमा ल्याउनुपर्नेछ र चिकित्सा प्रश्नहरू तपाईंले सोध्नु पर्नेछ जब तपाईं आफ्नो मेडिकल प्रदायकलाई देख्नुहुन्छ।
तपाईंको सामान्य स्वास्थ्यको बारेमा डाक्टरलाई सोध्ने प्रश्न
यदि तपाईसँग कुनै ठूलो चिकित्सा समस्या छैन भने पनि तपाईको स्वास्थ्यको बारेमा सक्रिय हुन महत्त्वपूर्ण छ। अध्ययनले देखाईएको छ कि तपाईको आफ्नै हेरचाहमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनाले अझ राम्रो नतिजा र बढ्दो सन्तुष्टि बढ्छ, भन्छ क्रिस्टल पोलसन , न्यू योर्क शहरमा एक नर्स व्यवसायी र बिरामी अधिवक्ता। यदि तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ भने तपाईं मेडिकल त्रुटि वा गल्तीहरू अनुभव गर्न पनि कम गर्नुहुन्छ। उनले तपाईंको अर्को मेडिकल अपोइन्टमेन्टमा निम्न प्रश्नहरू सोध्न सिफारिस गर्दछ:
आफ्नो राम्रो देखभाल गर्न म के गर्न सक्छु?
म कसरी मेरो स्वास्थ्य लक्ष्य _______ मा पुग्न सक्छु?
के मलाई वास्तवमै अर्को नियमित रक्त परीक्षण चाहिन्छ?
तपाईं किन यो परीक्षणको लागि अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ र परिणामको आधारमा तपाईं के कारवाही गर्नुहुन्छ?
केहि भरपर्दो वेबसाइटहरू म जान सक्छु जब म स्वास्थ्य र चिकित्सा जानकारी हेर्न चाहन्छु?
तपाईले सुन्नु भएको कुरालाई फेरि दोहोर्‍याउनुहोस्, र स्पष्टीकरणको लागि सोध्नुहोस् यदि केहि यस्तो चीज छ जुन तपाईंले बुझ्नुहुन्न।
प्रिस्क्रिप्शन औषधिहरु बारे डाक्टरलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न
पहिले बन्द, तपाइँ जहिले पनि तपाइँको सबै औषधिहरूको सूची, प्रिस्क्रिप्शन वा गैर-प्रिस्क्रिप्शन, र तपाइँले लिइरहनुभएको कुनै पनि पूरकहरूको सूची ल्याउनु पर्छ। यसले तपाइँको डाक्टरलाई तपाइँको औषधी सूचिको समीक्षा गर्न र औषधि अन्तरक्रियाको लागि कुनै सम्भावित हुन सक्छ।
उनीले सबै सल्लाहको औषधिहरुका बारे निम्न प्रश्नहरू सोध्न सल्लाह दिन्छन्।
म यो औषधी किन लिइरहेको छु? यसले कस्तो अवस्थाको उपचार गर्छ?
मैले लिने औषधीहरूको कुल संख्या घटाउने कुनै तरिका छ?
के त्यहाँ मेरो लक्षण वा अवस्थाका लागि राम्रो औषधीहरू छन्?
के त्यहाँ कम महँगो औषधीहरू पनि काम गर्छन्?
यदि मैले एक खुराक हरायो भने म के गर्ने?
के मेरो पूरकहरू सुरक्षित, लाभदायक, र मेरो लागि सही छन्?
उपचार विकल्पहरूको बारेमा डाक्टरलाई सोध्ने प्रश्न
जब तपाइँ एक चिकित्सा निदान प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँले उपचार विकल्पहरूको बारेमा पनि प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ। हामी निम्न सिफारिस गर्दछौं:
यस रोगका लागि भर्खरको क्लिनिकल परीक्षणहरू के हुन्?
यस रोगको लागि भर्खरको FDA- अनुमोदित उपचार के हो?
तपाईं किन यो विशेष उपचार विकल्प सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ?
यदि उपचारका लागि एक भन्दा बढी विकल्पहरू छन् भने, तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ जुन उत्तम काम गर्दछ?
यस उपचारको लागत के हो?
के त्यहाँ जेनेरिक विकल्प उपलब्ध छ? यदि हो भने, के यसले पनि राम्रोसँग काम गर्दछ?
यस उपचार प्राप्त गर्दा जोखिम र फाइदाहरू के हुन्?
कस्ता साइड इफेक्टहरू म आशा गर्न सक्छु?
यदि मैले साइड इफेक्टहरू अनुभव गरें भने मैले के गर्नुपर्छ?
के यो उपचारले मेरो अन्य स्वास्थ्य अवस्थालाई असर गर्दछ?
के मैले यस उपचारको प्रयोग गर्न कुनै जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्दछ?
प्रश्नहरू एक डाक्टरलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईंलाई शल्य चिकित्सा आवश्यक छ
कुनै शल्यक्रिया, चाहे ठूलो होस् वा सानो, गम्भीर विचारको योग्य छ। हामी तपाईंको डाक्टरलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्न सिफारिश गर्छौं यदि उसले शल्यक्रिया गर्ने सल्लाह दिन्छ भने:
मलाई किन शल्यक्रियाको आवश्यकता छ?
तपाईं किन यो विशेष प्रक्रियाको सिफारिश गर्दै हुनुहुन्छ?
के त्यहाँ यो शल्यक्रिया गर्ने एक भन्दा बढि विधि छ?
शल्य चिकित्सा खर्च कति हुनेछ?
यस प्रक्रियाको जोखिम र फाइदाहरू के हुन्?
के त्यहाँ शल्यक्रियाका विकल्पहरू छन्?
यदि मसँग यो सर्जरी छैन भने के हुन्छ?
के तपाई एक विशेषज्ञलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ जसले दोस्रो राय प्रस्ताव गर्न सक्छ?
मलाई कस्तो प्रकारको एनेस्थेसिया चाहिन्छ? के त्यहाँ साइड इफेक्टहरू छन्?
शल्य चिकित्साबाट पुनः प्राप्त हुन कति समय लाग्छ?
के डाक्टर योग्य छ?
म कति लामो अस्पतालमा रहन्छु?
मेरो जीवन शल्यक्रिया पछि कस्तो हुनेछ?
क्यान्सर वा दीर्घकालीन अवस्था जस्तो गम्भीर निदान प्राप्त भए पछि डाक्टरलाई सोध्ने प्रश्न
यदि तपाईलाई भर्खरै क्यान्सर वा अर्को ठूलो पुरानो रोग लागेको पत्ता लागेको छ भने तपाईका विचारहरू कताइलाग्दो हुन सक्छ। एकचोटि तपाईंले सास फेर्नुभयो भने, आफ्नो रोगको निदानको बारे आफैलाई शिक्षा दिन महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि प्रकारको मेडिकल निदान पछि, म तपाईंलाई रोगको बारेमा जति सक्दो जान्न प्रोत्साहित गर्दछु, डा। स्नेहल स्मार्ट भन्छन्। प्लीरल मेसोथेलियोमा केन्द्र विल्मिंगटन, डेलावेयरमा। उसले बिरामीहरूलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्न प्रोत्साहित गर्दछ:
मसँग कस्तो प्रकारको क्यान्सर छ, र यो कस्तो स्टेज र सेल प्रकार हो?
मेरो उपचार विकल्पहरू के-के हुन्, र प्रत्येकका फाइदा र जोखिमहरू के हुन्?
तपाईसँग [यस रोग] को उपचार गर्ने कत्तिको अनुभव छ, र तपाईलाई दोस्रो रायको लागि सिफारिस गर्ने कुनै विशेषज्ञ छ?
मसँग भएको क्यान्सरको प्रकारको लागि कस्तो क्लिनिकल परीक्षणहरू उपलब्ध छन्?
सम्भव भएसम्म तपाईको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिनु महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्य साक्षर हुनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो प्रदायकसँग विचारशील र ज्ञानवर्धक कुराकानी गर्नुभयो। हामी आशावादी छौं कि प्रश्नहरूको सूचीले तपाईंलाई तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको साथ शैक्षिक भ्रमणको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्दछ।
9 सर्वश्रेष्ठ कोलेजन पेय: तपाइँको सजिलो किन्न गाइड (2021)
HCG हार्मोन आहार:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
तपाइँ कहिले सम्म फ्लू भाइरस बोक्नुहुन्छ?
इन्फ्लुएन्जा ए को लक्षण के हो?
कहिले सम्म एक भरीएको नाक सामान्यतया अन्तिम हुन्छ
cephalexin 500 mg एक बलियो एंटीबायोटिक हो
जीवनशैली परिवर्तन संग टाइप2मधुमेह को उल्टो
कब्जियत बाट छुटकारा पाउन के गर्ने